हङकङमा बिनोद र शान्तिको प्रेम यसरी बन्यो अमर (भिडियोसहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हङकङमा बिनोद र शान्तिको प्रेम यसरी बन्यो अमर (भिडियोसहित)
हङकङ। हङकङको शुन्दर प्राकृतिक दृश्य र आधुनिकतालाई पृष्ठभुमि बनाएर तयार गरिएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। एचके ट्युव नेपाल अनलाईन टिभीको प्रडक्सनमा तयार भएको भिडियोलाई मज्जाको राईले निर्देशन, छायाङ्कन र सम्पादन गरेका छन्। भिडियोमा बिनोद बस्नेत र शान्ति नेपालीको रोमान्स देख्न सकिन्छ। छाल बनि सागरले बोलको गीत सुमित खड्काले गाएका हुन, गीतमा निरज श्रेष्ठको संगित र भेषबहादुर शाहको शब्द रहेको छ।
भिडियोमा सेन्स अफ क्लिकको आकर्षक ड्रेस डिजाईनिङ्, रेवती खड्काको मेकअप रहेको छ। लिलेश्वरी खड्का र सुनिल मलले संयुक्तरुपमा भिडियो मेकिङ्को ब्यवस्थापन गरेका हुन्।
प्रेमका आएको असमझदारी र त्यसले निम्त्याएको परिणाम नै भिडियोको मुलत कथा हो।
पछिल्लो समय हङकङमा नेपाली गीतका भिडियोहरु बन्ने क्रम जारी छ। समुन्द्र, गगनचुम्बी भवन, सफा सडक जस्ता दृश्यले बिदेशमा बनेको भिडियोहरुले दर्शकहरुको मन जितिरहेको छ।